Ny atao, mba tsy ho simba mihitsy ny tarehy…
Tsy dia manana olana firy eo amin’ny tarehy ianao, fa kosa maniry ny mba hitazona an’io hatsarany io. Misy ny tsara ho fantatra sy ny fomba amam-pahazarana mila atao, mba tsy hiandrasana an’ilay tarehy ho simba vao hikarakara azy. Indro ny torohevitra.
- Ny hodimaso no koloina voalohany
Manify kely mantsy io faritra io, ka mora itarafana ny fahasimban’ny hodi-tava. Araka izany dia mila fikoloana manokana izy io. Raha efa mananika ny 35 taona, dia tsara raha akora manamandina na serum tena natokana ho an’ny maso no ikoloana io faritra io.
- Tandremana tsara ny sakafo hanina
Mety tsy ataonao an-tsaina loatra ny fifandraisan’ny sakafo sy ny tarehy satria tsy manana olana firy ianao. Tadidio anefa fa raha mihinana sakafo be mpanala arafesina ao anaty toy ny legioma sy voankazo ianao, dia hampadio ny hoditrao sy hitazona ny fihenjanany izany. Ho ela kokoa vao hikentrona sy hiroraka ny hoditrao
- Misotro rano betsaka
Raha vitanao ny misotro rano 2litatra isan’andro, indrindra fa amin’izao andro mafana be izao, dia hahazo tahirin-drano ampy hahasalama tsara azy ny hoditrao. Veloma ny kentrona madinika sy ny fahamainan’ny hoditra, na ny hidihidy.
- Miala sigara
Sampanana roa tsy maintsy hanaovana safidy ny sigara sy ny hatsaran-tarehy. Ialao avy hatrany ity karazana zava-mahadomelina iray ity, raha tianao halandina sy ho tsara hatrany ny hodi-tavanao. Arakaraky ny mahaela ny fotoana hifohanao sigara mantsy, no ipoiran’ny kentrona sy ny hoditava miforiporitra, mifitsaka, maina kely, miroraka, … Tsy vitan’izay fa tsy hahazo endrika mazava tanteraka ianao, fa somary ho malomaloka foana, noho ireo singan-tsigara any anaty rà.
- Lokoy ny volo
Teknika iray tena mahomby hanakonana ny lesoka eo amin’ny tarehy ny fandokoana ny volo. Loko manazava endrika, fa tsy mifanipaka lavitra amin’ny lokon-koditra no atao amin’ny volo. Ho hitanao fa rehefa asongadinao ny taovolo, dia takona sy lefilefy ho azy izay tsimetimety mila afenina eo amin’ny tarehy eo.